Xiaomi Mi 8: Nkọwapụta, ọnụahịa na ntinye akwụkwọ gọọmentị | Gam akporosis
Xiaomi Mi 8: Akara ọhụrụ nke akara ahụ ugbu a bụ ọkwa
Daybọchị eruola. Kemgbe taa, Mee 31, emume Xiaomi bụ emume nke akara ndị China na-ahapụ anyị ọtụtụ akụkọ. Ihe kachasị atụ anya bụ ngosi nke ọkọlọtọ ọhụrụ ya, Xiaomi Mi 8. Ihe nke merela. Ekwentị ohuru ohuru ohuru bu ndi ochichi. Mgbe izu nke asịrị na leaks, anyị na-ama ihe niile banyere ngwaọrụ.
Xiaomi Mi 8 a bụ ekwentị nke ika ahụ na-achọ ime emume nke asatọ ya n'ahịa. Oge dị mkpa na mmepe ya, nke na-abịa n'otu oge kachasị nwee ihe ịga nke ọma. Ihe ha na-achọ ịtụgharị uche na njedebe a. Gịnị ka anyị pụrụ ịtụ anya ya?
Ekwentị na-adọrọ uche maka imewe nke ọkwa kachasị na ihuenyo ahụ. Nkọwa nke ga - eme ọtụtụ okwu, ọkachasị ndị na - adịghị mma. Ihe bụ ihe ọzọ, ọtụtụ ga-ahụ mmụọ nsọ dị ịrịba ama na iPhone X imewe-maara ihe na ekwentị.
1 Nkọwa Xiaomi Mi 8
Nkọwa Xiaomi Mi 8
Ahịa ndị China atụnyela ndị ọzọ na ngwaọrụ ahụ. Anyị na-eche ihu n'elu elu nke oke, a na-akpọ ka o dubaa katalọgụ ekwentị Xiaomi. Obi abụọ adịghị ya, ọ na-anọchite itu elu na ogo ma e jiri ya tụnyere ọgbọ gara aga, na mgbakwunye na mgbanwe na nhazi ya. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu:
Ihuenyo: 6.21-anụ ọhịa AMOLED na 19: 9 ruru na mkpebi FullHD + (2280 x 1080)
Nchekwa ime: 64GB / 128GB / 256GB
Rear igwefoto: 12 + 12 MP nwere oghere f / 1.8 na f / 2.4 Dual LED Flash, PDAF na-elekwasị anya, anọ axis OIS, HDR na 4K Video na 60fps
Igwefoto n'ihu: 16 MP nwere oghere f / 2.0
Batrị: 3.300 mAh na ngwa ngwa
Njikọ: 4G, WiFi n / ac, Bluetooth 5.0, NFC, ụdị USB C, GPS
Usoro njikwa: Android 8.1 Oreo na MIUI 10 dị ka akwa nhazi
Akụkụ: 154,9 x 74,8 x 7.6 mm
ndị ọzọ: ihe mkpisiaka ihe mmetụta, ihu mmeghe, Infrared, Splash na-eguzogide ọgwụ
Site na Xiaomi Mi 8 a, ụlọ ọrụ ahụ mechara nyefee ya. Nkọwapụta na ọ dị ka ha agaghị anabata, n'agbanyeghị ịbụ ezigbo ejiji na ahịa. Ọ bụ ezie na n'ikpeazụ, ha kwụsịrị inyefe ya, ọ na-emekwa ka ọdịdị ya dị elu. Nkọwapụta nke ị nwere ike ọ gaghị amasị gị, mana nke ahụ doro anya na ọ na-achịkwa atụmatụ nke ekwentị n'ihu. Maka ndị ọzọ, ha na-akụ nzọ na ihuenyo AMOLED nwere okpokolo agba pere mpe.
Na azụ anyị na-achọta igwefoto abụọ, nke edoziri n'ụzọ ziri ezi, nke nwere ọkụ ọkụ. Dị ka atụ anya, ọgụgụ isi ga-arụ ọrụ kachasị na ese foto ndị a. Ebe obu na ha n’enye ha ike. Ya mere, anyị nwere ike ịtụ anya ọtụtụ ihe site na igwe foto dị elu nke akara ngosi China.
Firmlọ ọrụ ahụ ahọrọla ekwentị dị ike. Xiaomi Mi 8 nwere ihe nhazi kacha mma na ahịa, na nke a na-aga inye ya ike dị ukwuu. Na mgbakwunye na obere ike oriri, nke ga - eme ka ọ nwee ike ịpụtakwu batrị ya na 3.300 mAh, na mgbakwunye ngwa ngwa ya.
Xiaomi achọghị itinye ihe egwu ma họrọ maka ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na azụ. Ihe bụ ihe ọzọ, anyị nwere ihu ihu na tinyekwa ihe mmetụta NFC. Ya mere na onye ọrụ nwere ike ime ka mobile ugwo comfortably. Ọrụ a na-enweta ọnụnọ, mana ọ kachasị mkpa na China, ebe a na-eji ọtụtụ ekwentị akwụ ụgwọ ọtụtụ ego.
Anyị ahụla na a ga-enwe nsụgharị atọ nke ekwentị dị elu dabere na ebe nchekwa ahụ. The RAM na-anọgide n'otu n'ọnọdụ niile, mana enwere ike ịhọrọ ya site na nhazi nchekwa achọrọ. Anyị ga-enwe nhọrọ atọ: 6/64 GB, 6/128 GB ma ọ bụ 6/256 GB. Xiaomi si otú a sonye na ejiji nke inye ọtụtụ ohere nchekwa anyị na-ahụ afọ a.
Versiondị mbụ nke ekwentị ahụ, yana 6 GB nke RAM na 64 GB nke nchekwa dị n'ime, ga-efu yuan 2.699, nke mgbanwe ahụ dị ihe dị ka euro 360.
N'aka nke ọzọ, ụdị nke Xiaomi Mi 8 na 6/128 GB ga-efu 2.999 yuan, nke ịgbanwe ha dị ihe dị ka euro 400.
Nke ikpeazụ nke ụdị ndị dị elu, nke nwere 6/256 GB, ga-abụ nke kachasị ọnụ, na ọnụahịa nke 3.299 yuan, na mgbanwe nke ihe 440 euro.
The kasị dịrị nchebe ihe bụ na gị ahịa ga-dịtụ elu mgbe ị na-abata na Europe. Mana anyị nwere ike ịhụ na Xiaomi na-ekwusi ike na ekwentị ya. Ebe ọ bụ na a elu-ọgwụgwụ Ọ bụ ihe ngosi dị ọnụ ala karịa ọtụtụ ekwentị na nso ya dị na ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi Mi 8: Akara ọhụrụ nke akara ahụ ugbu a bụ ọkwa
Miguel Torres dijo
Nnukwu ụgwọ maka ụdị njirimara m na-ahụ na batrị ya ... Dị ala nke ukwuu maka ụdị otu dị ukwuu.
Zaghachi Miguel Torres
Xiaomi okpukpu abụọ nke ahia ya zuru ụwa ọnụ na nkeji nke mbụ